ट्रम्पको विजयको सेरोफेरो « News of Nepal
ट्रम्पको विजयको सेरोफेरो
(एचके श्रेष्ठ) प्राकृतिक देनका रूपमा अपरिचित ढंगले भौगोलिक भूमिका रूपमा मात्र गुमनाम थियो अमेरिका सन् सोह्रौं शताब्दीको शुरुवातसम्म। सन् १४९३ मा किस्टोफर कोलम्बसले त्यो भूगोलमा पुगेर युरोपियनहरूलाई जानकारी दिएपछि नयाँ संसार (न्यु वल्र्ड) का रूपमा चिनियो। मानव बस्ती र जीवनको हिसाबले युरोपका विभिन्न राष्ट्रहरूबाट बीउ रोपिएको अमेरिका सोह्रौं शताब्दीको पूर्वमा युरोपियन नागरिकहरूकै साझा माइग्रेटेड थलो बन्न पुग्यो। यही क्रममा राज्यको उत्तर अमेरिकाको न्यु ≈याम्सायर, म्यासाचुसेट, कनेकटिकट, रो≈ड आइल्यान्ड, न्युयोर्क, न्युजर्सी, पेन्सिलभानिया, डिलेबर, म्यारियान्ड, भर्जिनिया, नर्थ क्यारोलिना, साउथ क्यारोलिना र जर्जिया नामक १३ राज्यमा बस्ती शुरू भयो। त्यही राज्यहरूको एकत्रित रूप युनाइटेड स्टेट अमेरिका हुँदै आयो।
सन् १७७६ सम्म बेलायतबाटै शासित र सञ्चालित अमेरिका सांस्कृतिक, सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक आदि विविध रूपमा आफ्नै ढंगले विकसित र परिपक्क बन्दै आए पनि राजनीतिक रूपमा अधीनस्त थियो। सन् १७७६ मा अमेरिकी स्वतन्त्र संग्राम सफल भएपछि भने सबै ढंगले आफ्नो पहिचान प्राप्त ग¥यो र त्यसले ‘अमेरिकन ड्रिम’ का रूपमा आफ्नै रप्तारमा अघि बढ्यो। हाल ४५औं राष्ट्रपति निर्वाचन भएको छ। जसमा रिपब्लिकन पार्टीका डोनाल्ड ट्रम्प विजयी भएका छन्। ‘अमेरिकी ड्रिम’ लाई अझ पूरा गर्ने जिम्मेवारी उनले पाएका छन्।
उनी न्युयोर्कमा एक धनाढ्य घरजग्गा व्यापारीका चौथो सन्तानका रूपमा जन्मिएका व्यक्ति हालसम्म कुनै राजनीतिक एवं सार्वजनिक पदको अनुभव नभएका अर्बपति हुन्। रिपब्लिकन पार्टीका तर्फबाट उम्मेदवार भएका आफ्नै संस्थापन पक्षको विरोधी र सहयोग नपाएका विजयी हुन्। उमेरले ७० वर्ष बूढो डोनाल्ड राजनीतिज्ञभन्दा पनि बिजनेसम्यान मान्नुपर्दछ। ‘अति श्वेतवादी’ कठोर हृदयको, हठी, अनुदारवादी, अपरिपर्वतनशील, अटेरी विशेषताले आन्तरिक र बा≈य संसारमा चिनिन्छन्। पटकपटक सेक्स स्क्यान्डलमा पर्दै आएका उनी राजनीतिक अतिवादीको प्रतिनिधि मानिन्छन्। उनले मेक्सिकन आप्रवासीलाई बलात्कारीको संज्ञा दिएर मुस्लिमलाई अमेरिका प्रवेशमा बन्देजको उद्घोष गरेर, महिलामाथिको दुव्र्यवहार गर्ने, शारीरिक अपांगतालाई उपहास गर्ने, तुच्छ अभिव्यक्ति दिने आदि कठोर र विरोधाभाषी व्यवहारका थिए। हालसम्म उनले तीन श्रीमती विवाह गरिसकेका छन्।
अमेरिकामा राष्ट्रपतिमा विजय हुनका लागि कुल ५ सय ३८ इलेक्ट्रोरल मतमध्ये बहुमत अर्थात् २ सय ७० मत आवश्यक पर्दछ। उनले २ सय ८९ इलेक्ट्रोरल मत ल्याएर आफ्ना प्रतिद्वन्द्वी डेमोक्र्याटिक पार्टीको हिलारी क्लिन्टनलाई हराए। उनी युवा पनि होइनन् ७० वर्षीय वृद्व हुन्। राजनीतिक रूपमा पोख्त पनि होइन, बिजनेसम्यान हुन्। नरम, उदार, लचिलो प्रवृत्तिको पनि होइनन् कडा, अटेरी, अनुदार हुन्। तर पनि अमेरिकी जनताको च्वाइसमा परे जो आश्चर्य चकित घटना हो।
अमेरिका जस्तो प्रजातन्त्र, मानवअधिकार र लैंगिक समानताको दुहाई दिने र विश्वको ठेकेदार ठान्ने मुलुकमा रिपब्लिकन पार्टीको उम्मेदवारले जिते। उनको प्रतिद्वन्द्वी पुरुष पनि होइन महिला हुन्। अमेरिका जस्तो देशमा पहिलोपल्ट महिला राष्ट्रपति उम्मेदवार हुँदा पनि ट्रम्पले नै जित्नु अर्को आश्चर्य हो। उनको आफ्नै पार्टीको संस्थापनको समेत समर्थनविना जित्नु उत्पातकै विषय हो। अमेरिका विश्वका हरेक देशका नागरिक बसोबास भएको देश हो। काला जातिको संख्या उत्तिकै छ। अन्य समुदायको पहुँच उस्तै छ। गरिखाने न्यून वर्ग उत्तिकै छन्। उनी आप्रवासीका विरोधी, मुस्मिल विरोधी, गरिब वर्गको नभएर धनाढ्य र काला जाति विरोधी हुँदाहुँदै पनि चमत्कारी ढंगले विजय भइछाडे।
चुनावी प्रचार अभियानमै उनले अति खरो भाषण र ताण्डव शैली देखाइसकेकाहुँदाहुँदै पनि निर्वाचित हुनु विश्वमै जादुमय घटना मानिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय जगत्ले समेत आशा नगरेको घटना हुन पुगेको छ। दुई–दुई कार्यकाल राष्ट्रपतिमा विजयी डेमोक्र्याटिक पार्टिका ओबामाको प्रभावमाथि अड्डा जमाए उनले।
अमेरिकी जनताको समीक्षा
अमेरिका इन्डिभिजुयालिस्ट विशेषता बोकेको राष्ट्र हो। त्यहाँका जनता खुसी र सम्पन्न तथा आधुनिक अत्याधुनिक प्रविधिले विकसित छन्। आ–आफ्नो काम, उद्योग, व्यापार, व्यवसायमा बढी मतलब राख्ने हुँदा राजनीतिको मतलब त्यत्ति हुँदो रहेनछ भन्ने कुरा त ट्रम्पको विजयले पनि देखायो। अमेरिकी जनता राजनीतिक रूपमा कति सचेत कति अचेत भन्ने प्रश्न खडा भएको छ। आखिर राजनीतिकभन्दा गैरराजनीतिक अनुभव भएको, यौन स्क्यान्डलको दाग लागेको, गैरप्रसाशनिक अनुभव भएको व्यक्तिलाई नै किन निर्वाचित गरे ? महिला उम्मेदवारलाई किन रिजेक्ट गरे ? एड्भान्स एजुकेटेडले भन्दा सामान्य र गाउँले जनताले बढी किन रुचाए ? तसर्थ उनीहरूले खास राजनीतिक प्रतिबद्धताभन्दा पनि व्यक्तिको आधार निर्वाचनलाई बनाएको देखियो। यस ढंगले ट्रम्पको विजयभन्दा पनि अमेरिकी जनताप्रति आश्चार्य मान्ने अवस्था छ। उनको चुनावी अभियानको सर्तहरूका आधारमा हेर्ने हो भने बहुमत अमेरिकी उनकै नीतिलाई स्वीकार्दा रहेछन्। अर्थात श्वेतलाई अनि अमेरिकनलाई प्राथमिकता दिने आप्रवासी तथा बा≈य समाजलाई नेग्लेट गर्ने ठहर हुन्छ। अन्य मुलुकलाई उनीहरूबाट टाढा राख्न चाहेको मान्न सकिन्छ।
ट्रम्पको विजयको असर
विगतमा बाराक ओबामा विजय हुनुको मूल कारण महिलाअधिकारका लागि गरेको योगदान, हेल्थकेयर जस्ता सामाजिक मुद्दामा सुधार, तत्कालीन स्यान्डी जस्तो प्राकृतिक विपत्तिको आँधीपीडितहरूलाई पु¥याएको राहत नै थियो। ओबामाभन्दा विगत कडा राष्ट्रपतिहरूका तुलनामा आबामा लचिलो हुनाले अन्तर्राष्ट्रिय सहानुभूति पाएका थिए। त्यो तुलनामा ट्रम्प अनुदारवादी र कडा मिजासका भएको र अन्तर्राष्ट्रिय भावनाको मतलब नराख्ने स्वभावको हुनाले उनले त्यत्ति सहानुभूति पाउने छैनन्। ओबामाको ठीक विपरीत उनी श्वेतवादी भएका कारण अश्वेतहरूप्रति उनले पक्कै कठोर व्यवहार गर्नेछन्। उनले चुनावी अभियानको क्रममै आप्रवासीप्रति कठोर अभिव्यक्ति दिएका, मुस्लिम समुदायलाई प्रवेश रोक लगाउने उद्घोष गरेको हुँदा विश्वभरका आप्रवासी र मुस्लिमप्रति प्रतिकूल प्रभाव पर्ने देखिन्छ। नेपाली आप्रवासीलाई समेत चिन्ताजनक अवस्थामा पु¥याएको छ। डीभी प्रणाली खारेज गर्न सक्ने सम्भावना छ। काला समुदायमा दमनको नीति लिन सक्ने अवस्था छ। धनाढ्यहरूको ट्याक्समा कटौती गर्ने सम्भावना छ।
रूसी राष्ट्रपति पुटिनले खुलेरै समर्थन गरेको हुँदा रूससँगको सम्बन्ध भने सुदृढ हुन सक्ने सम्भावना देखिन्छ। आप्रवासी तथा मुस्लिम समुदायप्रति कठोर देखिएको कुरालाई सकारात्मक ढंगले लिने हो भने ट्रम्प राष्ट्रवादी मान्न सकिन्छ। नकारात्मक ढंगले लिने हो भने अति पूर्वाग्रही तथा उग्र मान्न सकिन्छ। उनको विदेश नीतिमा ओबामाको भन्दा फरक अर्थात् कडापन आउने अड्कल गर्न सकिन्छ। समग्रमा उनीसँग अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध भने बिग्रन सक्ने देखिन्छ।
शिक्षाक्षेत्रमा सरकारको अदूरदर्शी दृष्टिकोण
पशुपति ‘भर्सेस’ पूर्वअख्तियार आयुक्त
निहित स्वार्थको द्वन्द्व: राष्ट्र निर्माणमा जटिल समस्या
एक जोड एक तीन !